Wafti Issimo ah oo uu hogaaminayo Suldaan Siciid Garaase oo booqasho ku tagay Buuhoodle. – Radio Daljir
Wafti Issimo ah oo uu hogaaminayo Suldaan Siciid Garaase oo booqasho ku tagay Buuhoodle.
Maarso 30, 2011 12:00 b 0
Buuhoodle, Mar 30 – Wafti dhaqameed isugu jira Isimo, cuqaal, nabadoono, iyo madax-dhaqameed kala duwan oo kasoo kicitimay gobolka Nugaal, uuna hogaaminayo Suldaan Siciid Maxamed Garaase ayaa maanta soo gaadhey magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn.
Wafti-dhaqameedkan ayaa waxaa magaaladda Buuhoodle ku soo dhaweeyey Isimo, cuqaal, aqoon yahan, siyaasiyiin, maamulka gobolka Cayn, xildhibaano iyo wasiiro ku sugan magaaladda Buuhoodle.
Waftiga ayaa waxaa meel 50km dhanka koonfureed ka xigta magaalada Buuhoodle kaga hortagey Isimo, cuqaal iyo madax-dhaqameed kale oo ka socdey gobolka Cayn, waxayna usoo gelbiyeen huteel loo sii diyaariyey.
Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo wafti hogaaminayey ayaa markii uu magaalda soo gaadhey kadib waxaa uu shir saxaafadeed ku qabtay huteelka uu degan yahay, waxaana uu ka warbixiyey ujeedada socdaalkooda, isagoo tilmaamay inay u socdeen booqasho iyo sidoo kale in ay dadka la wadaagaan dhibaatada haysata xiligan ee isugu jirta colaadda iyo abaarta.
Suldaan Garaase ayaa sheegay in magaalada si weyn logu soo dhoweeyey, loogana hor yimid meel ku dhow deegaanka Bursaalax ee gobolka Mudug; waxaana sidoo kale uu tilmaamay in socdaalkoodu ku salaysan yahay ardin dhaqan, uusan marna ku lug lahayn arimo la xidhiidha siyaasad.
Ugu danbayntii, Suldaan Garaase ayaa ugu baaqay bulshada gobolka Cayn in ay ka shaqeeyaan nabadda, islamarkaana aysan iyagu cid ku xadgudbin.
Garaad Saleebaan Buraale Adam oo isna ka hadlay shirka jaraa’id ayaa ka warbixiyey safarka waftiga ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhaweeyeen waftiga, kulamo la qaadan doonaan madax dhaqameedka gobolka Cayn.
Ma aha markii ugu horaysey ee wafti Ismo ah oo ka socda gobollada Bariga Puntland uu soo gaadho magaalada Buuhoodle; socdaalka waftiga ayaa ku soo beegmayaa xili ay gobolka Cayn ka taagan yihiin colaado, iyo abaaro.